Jubaland: Dowladda Federaalka shuruud ayay ku xirtay sii deynta Cabdirashiid Janan - BBC News Somali
Jubaland: Dowladda Federaalka shuruud ayay ku xirtay sii deynta Cabdirashiid Janan
Image caption Cabdirashiid Janan
Mas'uuliyiiin ka tirsan dowladda federaalka ookal hore ka hadlay xarigiisa aya sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan eedeymaha loo jeediyay, maxkamad na la soo taago doonaa.
" Dadkii aan dirnay shuruud ayay ku xireen, waxayna ku yiraahdeen arrimo siyaasadeed ayaanu ku heysanaa ee ciidanka daraawiishta Jubaland soo wareejiya,dowladaha deriska ha la macaamilina, Jubaland doorashadeedi ma aqoonsanin dhaha, arrimo sidaas ayay kala hadleen dadkii aqoonyahanada iyo ganacsatada ee u tegay ", ayu BBC-da u sheegay Maxamuud Sayid Aadan.
"Runtii Cabdirashii aad ban uga xunahay sida loola dhaqmay, ninkaas waa la afduubay, wax arkay ma jiraan marka laga reebo xaaskiisa oo mudo 30 daqiiqa ah habeen saqdhexe ay tuseen",ayuu raaciyay.
Image caption Maxamuud Sayid Aadan
"Horta Cabdirashiid cid uu gacantiisa ku dilay ama ku eedeneyso ma jirto, haddii ay dagaalo dhacayaan ama Magaalo la qabtay ha ahaato ama dad la tuhmay ha ahaato, khaladaad way dhacayaan, khaladaadka dadkii sheegtayna inbadan oo kamid sida nidaamkii aan degsanay ba waa la xaliyay ", ayuu yiri Madaxweyne ku xigeenka.
Eedeymaha ka soo yeeray Madaxweyne ku xigeenka Jubaland ayay BBC-da isku dayday inay wax ka weydiiso mas'uuliyiinta dowladda federaalka, balse nooma aysan suurtagelin in aan helno qof ka tirsa dowladda.
Cabdirashiid Janan dadka dhaleeceeya waxa ay ku eedeeyaan inuu gacan bir ah ku qabto dadka maamulkiisa ka soo horjeesta amaba su'aal galiya sida uu wax u maamulo.
Waxaa lagu eedeeyay inuu gaystay tacaddiyo ka dhan ah aadaha; waxaa ka mid "in uu dilay dad maxaabiis ahaa oo u xirnaa maamulkiisa", sida ay sheegeen hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha.
Hay'ad u doodda xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in wasiirka amniga Jubbaland ay tahay "in uu gurto miraha cadaaladda ee ay helaan dadkii uu dhibaatada u geystay".
Hay'adda Amnesty International oo u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in Cabdirashiid Janan "looga shakisan yahay in uu masuul ka ahaa dembiyo ka dhan ah shuruucda caalamiga ah iyo xadgudubyo halis ah oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha".
"Waxaa ka mid ah carqaladeynta kaalmada bini-aadamnimo," ayuu yiri Agaasime ku xigeenka hay'adda Amnesty International ee Bariga Afrika, Seif Magango.
"Xarigga Cabdirashid Janan waa tallaabo muhiim u ah isla xisaabtanka la xiriira xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee muddada sanadaha ah la geysanayay iyadoo ciqaab aysan marin kuwii ka dambeeyay ee ah dadka awoodda leh ee Soomaaliya", ayuu yiri Seif Magango.
"Baaritaanka iyo maxkamadeynta Cabdirashiid Janan waa in ay horseedaan xilli ay cadaalad helaan dadka dhibanayaasha ah ee xuquuqdooda aadanaha lagu tuntay iyo qoysaskooda ku sugan Soomaaliya", ayuu hadalka ku sii daray.
Image caption Maamulka Jubaland ayaa sheegay in xariga wasiirka uu yahay sharci darro
Hay'adda dabagalka ee Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya iyo Eritrea ayaa warbixinnadoodii 2016 iyo 2017 ku eedeeyay Cabdirashiid Janan "Xadgudubyo halis ku ah xuquuqda aadanaha".
Sidoo kale waxay la xiriiriyeen "Abaabullidda carqaladeyn ka dhan ahayd kaalmada bini-aadamnimo" muddadii u dhexeysay 2014 iyo 2017.